Xukumadda oo lagu cadaadinayo inay heshiishka hubka uga baxdo Sacuudi Carabiya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xukumadda oo lagu cadaadinayo inay heshiishka hubka uga baxdo Sacuudi Carabiya
La daabacay fredag 20 februari 2015 kl 13.26
Xukumadda Stefan Löfven ayaa cadaadis culus kalo kulmaysa gudaha xisbiga Socialdemokraterna oo xubno badan doonayaan in Sweden ugu baxdo heshiiska wadoshaqeynta militeriga dalka Suacuudi Carabiya.
Maanta saddex ka tirsan xisbiga S ayaa ku qoray wargeyska DN in aysan aheyn wax la difaaci karo in Sweden hub u dhoofiso waddan uu ka taliyo rajim naxariis daran.
Sidoo kale ururka dhillinyarada Socialdemokratiga SSU, iyo weliba ururada arddeyda iyo diimaha ee Socialdemokaretrna ayaa horey xukumada uga dalbaday in ay jexjeexdo heshiiska meliteri ee ay Sweden kula jirto dalak Sacuudi Carabiya.
Jytte Guteland oo ah xildhibaanad fadhida baarlamaanka EU xubin ka ah xisbiga Socialdemokaretrna oo maanta la hadlaysay laanta Ekot ayaa ayana maanta ku baaqday in heshiiska meliteri looga baxo boqortooyada Scuudiga.
- Waddan ruux bloggare ah ku xukumay in la jeedalo maalin kasta oo jimco ah, oo ay boqortooyada heysato awoodda oo dhan, dumarkana xaquuqdooda lagu tunto, waddanka noocaas ah wax aan diktaertar aheyn laguma tilmaami karo, ayey.